फेसबुकले जुराएको भद्रगोलका जयन्तेको सुन्दर परिवार (तस्बिर सहित) - Mitho Khabar
February 12, 2020 mithokhabarLeaveaComment on फेसबुकले जुराएको भद्रगोलका जयन्तेको सुन्दर परिवार (तस्बिर सहित)
बुलबुल । नेपाल टेलिभिजन बाट हरेक साताको शुक्रवार प्रसारण हुँदै आएको चर्चित तथा निकै लोकप्रिय हास्य टेलिश्रृखला भद्रगोलका एक पात्र हुन गोविन्द कोइराला ‘जयन्ते’ । भद्रगोलको सुरु देखी नै मुख्य कलाकार अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’को भतिज को रूपमा देखिने गोविन्द कोइराला ‘जयन्ते’ चर्चित छन् ।
भद्रगोलमा उनको शैली र अभिनय धेरै दर्शकहरूले निकै मन पराएका हुन्छन् । उनले बोल्ने ढिलो बोली र लामो हाँसो सहितको काका, हा हाहा भन्ने शैली धेरैको मुखमा नै झुण्डिएको पाइन्छ । भद्रगोल सुरु भएपछि २ भागमा उनले अभिनय गर्ने मौका पाएका थिए । ४ भाग पछि उनले पाँडेको भतिज जयन्ते भएर पर्दामा देखिएका हुन् ।
कृषि पत्रकारको भूमिकामा भद्रगोलमा प्रवेश गरेका गोविन्द केही भागमा पत्रकारको रोल गरेर त्यसपछि अहिलेसम्म पाँडेका भतिज जयन्ते बनेर आइरहेका छन् । अर्जुन घिमिरे अर्थात् नर नारायण पाँडेको भतिजोको रूपमा प्रस्तुत भएको उनको चरित्रलाई धेरै दर्शकले रुचाइएको छ । तर गोविन्द कोइरालाको वास्तविक जीवन भने भद्रगोलमा देखिए भन्दा ठिक उल्टो छ ।
भद्रगोल सिरियल हेर्ने दर्शकहरूले वास्तविक अनुहारमा देख्दा धेरैले नचिन्ने गरेको बताउँछन् ।रोचक कुरा गोविन्द कोइरालाको विवाह फेसबुकमा लभ परेर भएको बताउँछन् । श्रीमती मनिता घिमिरे सँग प्रेम विवाह गरेका उनको अहिले दुई सन्तान पनि छन् । तस्बिरमा हेर्नुहोस् जयन्तेको सुन्दर परिवार ।
कान्छा छोराले तेक्वान्दोमा गोल्ड मेडल जितेको खुशी यसरी शेयर गरे शाहरुख खानले
किन जप गरिन्छ ? र त्यसको फाईदा के हो ? जानुहोस् ;
September 21, 2020 September 21, 2020 mithokhabar
नायिकाका हट तस्वीरले मुम्बईमा हँगामा
June 23, 2020 mithokhabar